Mareykanka oo cunaqabateyn halis ah saaray Iiran iyo caalamka oo diidan - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Mareykanka oo cunaqabateyn halis ah saaray Iiran iyo caalamka oo diidan
TEHRAN (HALBEEG) – Iiraan ayaa wacad ku martay in ay tallaabo cad ka qaadeyso Mareykanka, xilli Washington ay sheegtay in ay dib u soo celineyso cuna-qabateynta Iiraan iyadoo aan wax ogolaansho ah laga helin QM.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa Axaddii shalay aheyd khudbad toos ah shacabka uga jeediyay Telefihinka dowladda, isagoon sheegay in uu u mahadacelinayo quwadaha caalamka maadaama ay diideen ololaha Mareykanka uu ku doonayo in dalkiisa dib loogu celiyo cunaqabateynta.
Dadaalka Mareykanka ee cadowtinimada Iiraan ayuu ku tilmaamay mid maraya meeshii ugu xumeyd oo fashil ah.
Mareykanka ayaa la kulmay diidmo waddamada kale ah “Maanta waa maalin meel wanaagsan ka gashay xusuusta iyo diblumaasiyadda dalkeena”
Wuxuu tilmaamay Ruuxaani in Mareykanku uu dadaal u galay sidii uu saxiixayaal kale ugu heli lahaa heshiiska Niyuukleerka Iiraan maadaama uu isaga baxay heshiiska.
“Maanta waxaan dhihi karnaa waa maalin ay gaartay meeshii ugu sarreysay ee cadaadiska Mareykanka uu ku hayo Qarankeenna, islamarkaana cadaadiskaas uu ku go’doomay kaligiis “ ayuu yiri Madaxweyne Xasan Ruuxaani.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday heshiiska saxiixayaasha shanta ah Neyuukleerka iyo ballan-qaadyadii ay Tehran ku gashay heshiiska, waxa uuna carrabka ku adkeeyay in Tehran ay si buuxda u fulin doonta ballan-qaadyadeedii.